Brass Ball valve တပ်ဆင်နည်း
1. ပိုက်ချည်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Brass Ball Valve F1807 PEX အတွက်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သည့်အခါ၊ ပိုက်သည် valve body ၏ မျက်နှာပြင်အဆုံးနှင့် ထောင့်ညီညီဖြစ်သင့်ပြီး ဖဲကြိုးကို တစ်ဖက်တည်းရှိ ဆဋ္ဌဂံ သို့မဟုတ် အဋ္ဌဂံအပိုင်းတွင် လိမ်ထားသင့်သည်။ ချည်မျှင်နှင့် ချည်နှောင်ခြင်းမပြုသင့်ပါ...
ပုတ်ကို ဘာကြောင့် မတင်းကျပ်နိုင်တာလဲ။
ပုတ်ကို ဘာကြောင့် မတင်းကျပ်နိုင်တာလဲ။Kendo ၏ သူငယ်ချင်းများသည် ဤပြဿနာကို ကြုံဖူးကြပေမည်။faucet အတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်။အတူတူကြည့်ကြရအောင်။faucet ကိုယ်ထည်၏ gasket သည် ချောင်နေသောကြောင့် ၎င်းကို ဖယ်ရှားပြီး အသစ်တစ်ခုနှင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ကြွေထည်ကြေးဝါ Bibcoc...
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင်ကို မထိန်းသိမ်းမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိစ္စများ
ကြေးနီ Brass Ball Valve FNPT ပျက်သွားပြီးနောက်၊ ၎င်းကို များသောအားဖြင့် ဖြုတ်တပ်ပြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်။အောက်ဖော်ပြပါ Yuhuan အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူသည် ဘောလုံးအဆို့ရှင်မပြုပြင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို သင့်အား ရှင်းပြပါမည်။ဘောလုံးအဆို့ရှင်ကို ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်အတွင်း ဖိအားအောက်မှာ အရည်တွေရှိနေသေးတာမို့...
Brass Ball Valve ကိုယ်ထည်၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပေါများသော်လည်း၊ သံချေးတက်ခြင်းပြဿနာသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ဥပမာအားဖြင့်၊ sulfuric acid သည် အလွန်အဆိပ်သင့်စေသော...
1. ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရွေးချယ်မှုအရ အမျိုးမျိုးသောအဆို့ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီး ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။2. လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ ရွေးချယ်မှုအရ၊ အသုံးများသော Brass Ball Valve ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းပါ၀င်သည် ။
130 ကြိမ်မြောက် Canton Fair
130 ကြိမ်မြောက် တရုတ် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ပုလဲမြစ် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဖိုရမ်ကို အောက်တိုဘာလ 14 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co.,Ltd သည် အကြိမ် 130th Canton Fair သို့ တက်ရောက်သည်။အကြိမ် 130 မြောက် Canton Fair ကို အောက်တိုဘာ 15 ရက်မှ 19 ရက်အထိ ငါးရက်ကြာ အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး...
1. အဆို့ရှင်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ အတွင်းပိုင်းနှင့် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်ပြီး၊ ချိတ်ဆက်ထားသော bolts များကို အညီအမျှ တင်းကျပ်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ထုပ်ပိုးမှု သေးငယ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2.တပ်ဆင်သည့်အခါအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ထားသင့်သည်။3.Large size gate valve နှင့် pneumatic control valve b...
လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်တွင် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၊ အစိတ်အပိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာနှင့် အစိတ်အပိုင်းအဆို့ရှင်တို့ ပါဝင်သည်။valve switch power သည် electric actuator မှလာသည်။လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်သည် အသုံးပြုရပိုအဆင်ပြေသောကြောင့် ၎င်းကို ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ...
လွန်ခဲ့သည့်6လအတွင်း၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီး အပတ်တိုင်း စံချိန်သစ်များ ဆက်လက်ချိုးဖျက်နိုင်သောကြောင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ပို့ဆောင်သူများ/ပို့ဆောင်သူများ စုစည်းမှုဈေးကွက်သည် ယခုနှစ်တွင် ပုံမှန်အဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်ချက်များ ဆုံးရှုံးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရသည်။SCFI အညွှန်းကိန်းအရ ပေ ၄၀ ရှိသော လက်ရှိစျေးနှုန်း၊
Yuhuan သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။2020 ခုနှစ်တွင် Yuhuan ရေပိုက်အဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ထွက်ကုန်တန်ဖိုးသည် ယွမ် 39.8 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များ၏ စုစုပေါင်းထွက်ရှိမှုတန်ဖိုး၏ 25% ခန့်ရှိသည်။ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 130 ကျော်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။Plumbing valve က အကြီးဆုံး...
"ဆယ့်လေးငါးနှစ်" ကြေးနီအဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းသုတေသနနှင့် စက်မှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း အထူးသုတေသနနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာ
“၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း” သည် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မီရေး၏ အရေးပါသော ကာလအထိ ဘက်စုံကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ရန် အခြေခံအကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပြီး၊ “၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း” (၂၀၂၁-၂၀၂၆) စီမံကိန်းသည် အလုံးစုံ ပြည့်စုံပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ခေတ်မီရေး ခရီးသစ်...
ဖုန်း : 86-576-87499999